နန်းသီရိလွင်| January 10, 2013 | Hits:719
အလုပ်သမား ဥပဒေ ခိုင်မာအားကောင်းရန် လိုအပ်နေဟုဆိုမြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဒု ဝန်ကြီးဆွေးနွေး (ရုပ်/သံ)လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာများ မပြေလည်သေး နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Hay Man January 10, 2013 - 10:31 am	Oh my gosh! How do they survive? I wish the people boycott and no one works for this company.